२०७३ मङ्सिर १६ गते बिहीवार
२०७३ मङ्सिर १६ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस् ।
घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउन प्रजिअको निर्देशन
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले स्वास्थ्य सेवामाथि सबै नागरिकको समान अधिकार रहेकाले घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएका थिए। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साको आयोजना तथा युनिसेफ नेपालको सहयोगमा नेशनल मेडिकल कलेजमा बुधवार आयोजित जिल्लाको लगानीसम्बन्धी तीन दिने समीक्ष्Fा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै सरकारी कर्मचारीहरूमा निरन्तरता र लगनशीलताको कमी देखिएकोले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको प्रजिअ घिमिरेले बताए। प्रजिअ घिमिरेले राज्यले स्वास्थ्य, शिक्ष्Fालगायतका क्षेत्रमा लगानी गरे पनि कर्मचारीहरूको हेलचेत्र्mयाइँको कारण समानरूपले पर्सावासीले सेवा नपाएको दुखेसो पोखे। जनचेतनाको कमीको कारण बच्चा कुपोषित हुने गरेको तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले सही समयमा सुझाव दिन नसकेको कारण पर्सावासीले समस्या भोगिरहेको बताए। नेपाल सरकारले स्वास्थ्यचौकीहरूलाई तोकेर पठाएको औषधि पुगे नपुगेकोबारे सबैजनाले चासो राख्नुपर्ने बताए। उनले भने– सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन, जनता पनि जागरूक हुनुपर्छ। इमानदारीपूर्वक समयको पालना गरे नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीले नै देश बना
रामऔतार कुर्मी अपहरणमुक्त
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, १५ मङ्सिर/ वीउमनपाका नगर प्रहरी रामऔतारप्रसाद कुर्मी अपहरणमुक्त भएका छन्। गएराति उनी अपहरणमुक्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। हरपुर गाविसमा रहेको आप्mनो खेतको बाली लिन जाने क्रममा उनी मङ्सिर १३ गते साँझदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनका छोरा विजय पटेलले बुबा अपहरणमा परेको अड्कल गरेका थिए। अपहृत कुर्मीले आपूm अन्दाजी १ बजे बिहान मधुवन मथवलको औराहामा जङ्गल क्ष्Fेत्रबाट अपहरणकारीको चङ्गुलबाट उम्केर भाग्न सफल भएको बताए। उनले जङ्गलबाट भागेर गाउँको परालको थुप्रोमा रात बिताएको र स्थानीयको मदतमा बिहान प्रहरी र छोरालाई खबर गरेको बताएका छन्। अपहृत कुर्मीले धानबाली लिन जाने क्रममा खेतमा खानपिन गरी सुतेको अवस्थामा चार/पाँचजनाको समूहमा आएका हतियारधारीले अपहरण गरी जङ्गल लगेको बताए। उनले अपहरण गर्नेहरूको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन्। अपहरण किन र केका लागि गरेको भन्नेबारे पनि खुलेको छैन। इप्रका एकटाँगाका प्रनानि लक्ष्मण गौतमले अपहृत कुर्मी प्रहरी सम्पर्कमा आएपछि प्रहरी उपरीक्ष्Fकलाई खबर गरेको बताए। घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी उपरीक्ष्Fक गोविन्द साहले अपहरणबारे अनुसन्धान
हरि खेतान आधुनिक अध्ययनतर्फ उन्मुख
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसले सुविधासम्पन्न आधुनिक पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको क्याम्पस प्रमुख डा. भगवानप्रसाद यादवले बताएका छन्। क्याम्पसको भुइँतलामा रहेको पुरानो पुस्तकालय परिवर्तन गरी तेस्रो तलामा नयाँ पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको डा. यादवले बताए। उनले पुस्तकालयमा १ लाख पुस्तक राखिएको र विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको बताए। हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसलाई आधुनिकीकरणतर्पm लैजाने क्रममा क्याम्पसले दुई वर्ष पहिले सञ्चालन गरेको डिजिटल बोर्ड अहिले निकै प्रभावकारी रहेको बताए। क्याम्पसमा रहेको करिब ६० वटा कक्ष्Fाकोठामा डिजिटल बोर्डको व्यवस्था गरिएको र विद्यार्थीहरूलाई सोहीमार्पmत् अध्यापन गराइरहेको उनले बताए। यसैगरी, उनले क्याम्पसमा आधुनिक कम्प्युटर ल्याबबाट विद्यार्थीहरू लाभान्वित भइरहेको बताए। उनले अहिले क्याम्पसमा चार सिप्mटमा अध्ययन भइरहेको बताए। क्याम्पसमा ४ हजार विद्यार्थीहरू दैनिक अध्ययन गर्छन्। क्याम्पसमा महिलाहरूको लागि छुट्टै कक्षा सञ्चालन भएकोले करिब दुई हजार छात्राहरू अध्ययनरत छन्। छात्र–छात्रा बराबरी सङ्ख्यामा अध्ययन गर
टाइगर टोलीले भारु ५ लाख बेपत्ता पा-यो
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ वीउमनपा–२, छपकैया दरबार पछाडिको खेतबाट मङ्गलवार दिउँसो पक्राउ परेको मोटरसाइकलसहित नगद भारु ५ लाख प्रहरीले बेपत्ता बनाएको समाचार प्राप्त भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार छपकैयाको खेतमा काम गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाका अनुसार मङ्गलवार दिउँसो १ बजे भारतीय मोटरसाइकलमा सिरकमा लुकाइ ल्याएको भारु ५ लाख प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। एक घण्टापछि प्रहरी सेतो मोटरसाइकलमा आएको र मोटरसाइकलसहित सिरक लिएर गएको प्रत्यक्षदर्शी एकजना किसानले बताए। उनका अनुसार सिरकभित्र भारु ५ सय र हजारका नोटको बन्डल वीरगंजबाट रक्सौलतर्पm लगिरहेको अवस्थामा विपरीत दिशाबाट आएको प्रहरीलाई देखेर मोटरसाइकल चालक मोटरसाइकल छाडेर भागेका थिए। प्रहरीले बरामद गरेको सो मोटरसाइकल आप्mनो रोहबरमा खानतलासी गर्दा रकम भेटिएपछि प्रहरीले मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिई लगेको थियो। यस विषयमा प्रहरी नायब उपरीक्ष्Fक चक्रराज जोशीले आपूmलाई सो घटनाबारे टाइगर टोलीबाट जानकारी नआएको बताए। तर त्यस विषयमा खोजबिन शुरू गरेको र ड्युटीमा खटेका प्रहरीको विवरण लिने कार्य भइरहेको बताएका छन्।
तास बेचेर मासिक डेढ लाखभन्दा बढी आम्दानी
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ साढे तीन दशक पहिले भारतको रक्सौलस्थित कृष्णा टाकिज हल क्षेत्र मासुको परिकार तासको लागि चर्चित थियो। कृष्णा टाकिज बन्द भएपछि तास खाने पारखीहरूको आवतजावतमा कमी आयो र ती पसलहरू बन्द भए। त्यसपछि अढाई दशकदेखि वीरगंजमा दुई परिवारले मासुको परिकार तासलाई आयस्रोतको माध्यम बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । वीउमनपा–१४, श्रीपुरमा रहेको विश्र्वको तासपसल र आदर्शनगरस्थित पुरानो अप्सरा सिनेमा हल रहेको स्थानमा सञ्चालित सागर होटल तासको लागि चर्चित छन्। पुरानो बसपार्क छँदा दिनानाथ सोनारले सञ्चालनमा ल्याएको तासपसल १७ वर्षपछि उनले छोरा सुग्रीमलाई जिम्मा लगाएपछि सुग्रीमले सात वर्षदेखि तासको व्यापार गर्दै आएका हुन्। तासपसलबाट दिनानाथले दुई छोरा, एक छोरीको भरणपोषण गरी घरजमसमेत गराइसकेका छन् भने अहिले सुग्रीमले आप्mना चार छोराछोरीको जीविकोपार्जन पनि त्यही तासपसलबाट गरिरहेका छन्। बुबाले ७५० ग्राम मासुको तास बनाएर शुरू गरेको पसल बीचमा दैनिक २० किलोसम्म बिक्री हुने गरेको सुग्रीमले बताए। अहिले दैनिक १० किलोसम्म तासको खपत रहेको र त्यसबाट दैनिक ३ हजार रुपैयाँको हाराहारीम
ट्याक्टरसहित काठ नियन्त्रणमा
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, १५ मङ्सिर/ पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्ष्Fेत्रबाट काठसहित एक ट्याक्टरलाई वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। जय माँ जगदम्बा सामुदायिक वनबाट रूख कटान गरी भारततर्पm लगिरहेको अवस्थामा महादेवपट्टि गाविस–८ पिपराबाट ना.१ त ६९५२ नं.को ट्याक्टर र सोमा लोड गरिएको १३ क्युफिट काठ सेक्टर वन कार्यालय बसन्तपुरका जमदार रामाशीष राउत कुर्मी र स्थानीयवासीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेको काठ र ट्याक्टर आवश्यक कारबाईको लागि वन्यजन्तु आरक्ष्Fमा बुझाइने जिल्ला वन कार्यालय पर्साका अधिकृत चन्द्रदेवलाल कर्णले बताए। पक्राउ परेको ट्याक्टर पञ्चमुखी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष्F वैजनाथप्रसाद यादवको रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ।
बाटो बन्द गरी पसाहा खोलाका ठेकेदार भागेको आरोप
शिवशङ्कर मिश्र, कलैया, १५ मङ्सिर/ अधुरो रहेको पसाहा खोलाको पुल निर्माण कार्य बीचमैं छाडेर बाटो बन्द गरी ठेकेदार भागेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। कलैया गंजभवानीपुर जाने बाटोमा पर्ने पसाहा खोलाको पक्की पुलको निर्माण कार्यमा पुलको पश्चिमपट्टि एक दिन मात्र रोलिङ मेसिन चलाएर ठेकेदार भागेको स्थानीय वीरेन्द्र साहले बताए। पूलको पूर्वपट्टिको बाटो नै जाम गरी ठेकेदार भागेको पूर्व गाविस अध्यक्ष ह्दयप्रसाद जैसवालले जनाए। काम छोडेर गएपनि कम्तीमा बाटो सुचारु गरेको भए हुन्थ्यो, कस्तो ठेकेदार हो ? बीच बाटोमैं माटो थुपारेर बाटो बन्द गरी बेपत्ता भएको छ, अध्यक्ष जैसवालले भने। पुल निर्माण कार्यको अनुगमन सडक विभागबाट फितलो भएको भन्दै पुलको अगाडि पछाडि माटोले पुर्नुपर्नेमा बालुवाले पुरी बाटो बनाइएकोले सो बाटो बढी दिन टिक्न नसक्ने पूर्वसभासद् आत्माराम साहले बताए। सडक विभाग हेटौंडाका पुल इन्चार्ज जयराम अधिकारीलाई जानकारी दिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको पूर्वसभासद् साहले बताए। वर्षायाममा आवतजावत गर्ने उद्देश्यले थोरै माटो पुरेर ठेकेदारले निर्माण कार्य अधुरै छोडेर गएपछि सो पुलको निर्
चुनावभन्दा व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद थपमा तीन दल लाग्यो –त्रिपाठी
शिवशङ्कर मिश्र, कलैया, १५ मङ्सिर/ चुनावभन्दा व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद थप गर्न तीन दल लागेको तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ह्दयेश त्रिपाठीले आरोप लगाएका छन्। बाराको कलैयामा बुधवार तमलोपाद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले अहिलेसम्म चुनावको प्रारूप तयार नभएकोले कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नसक्ने बताए । समग्र मधेसको ११ बुँदे मागमध्ये ३ वटा बुँदा लगभग पूरा भएको बताउँदै उनले ८ वटा बुँदा पनि आगामी दिनमा पूरा गराउन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहने बताए। दर्ता भएका ४ वटा प्रस्तावमा ३ वटामा कुनै मतभेद नरहेको भन्दै चौथो बुँदा सीमाङ्कन नै महŒवपूर्ण रहेकोले १० प्रदेशमध्ये तराईको पूर्वमा मधेस प्रदेश र पश्चिममा थरूहट प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो धारणा रहेको उपाध्यक्ष त्रिपाठीले बताए। एमाले सत्तामा बस्दा सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेको तर आजको दिनमा दोधारे चरित्र देखाएको बताउँदै उनले मधेसीको प्रमुख विपक्षी एमाले नै रहेको बताए। प्रशिक्षण कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी आएका करिब दुई सय व्यक्तिहरूलाई अबीर र टीका लगाएर उनले पार्टीमा प्रवेश ग
अलपत्र परेको ठोरीको विद्युतीकरण कार्य शुरू
प्रस, ठोरी, १५ मङ्सिर/ अलपत्र परेको ठोरीको विद्युतीकरण कार्य आइतवारदेखि शुरू भएको छ। झन्डै एक दशकदेखि अलपत्र परेको ठोरीको विद्युतीकरण कार्य पुनः शुरू भएको हो। वर्षाका कारण पोल ढलेर क्षति पुगेका स्थानमा पुनः पोल गाड्नका लागि खाल्डो खन्ने काम भएको छ। एक्साभेटरको सहयोगले ठोरी–५ देखि ढेडुखोलासम्मको ६ स्थानमा पोल गाड्नका लागि खाल्डो खन्ने काम भएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि भागवत दासले बताए। हनुमाननगरको भञ्ज्याङदेखि ढेडुखोलासम्म ७ देखि १० वटा पोल गाड्नुपर्ने आवश्यक रहेको जिल्ला विकास समितिका इन्जिनियर ईश्वरदेव यादवले जानकारी दिए। उक्त स्थानमा पोल गाड्नका लागि यसअघि अलपत्र अवस्थामा रहेका ४ वटा पोल उखालेर ल्याउने काम सम्पन्न भएको उनले बताए। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध पु¥याएपछि ठुटेखोलादेखि पश्चिमतर्पm ४ वटा पोल अलपत्र अवस्थामा थियो। एसएसबीले सीमा विवाद देखाउँदै विद्युतीकरणमा अवरोध गरेपछि पोल गाडेको ठाउँभन्दा ५ सय मिटर उत्तरतर्पmको सिल्भर हिल (परेवा भित्ता)बाट विद्युतीकरणको काम भएको थियो। आवश्यक स्थानमा पोल गाड्ने र तार झुन्ड्याउने काम सकिएपछि सबै तार तन्काउने काम गरिने ठ
हरिहरपुर नौतजमा कुस्ती प्रतियोगिता
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ हरिहरपुर नौतज, टोल गुलरियामा एक दिने कुस्ती प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले चन्दा सङ्कलन गरी आयोजना गरेको कुस्ती प्रतियोगिताको उद्घाटन नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि श्याम पटेलले गरेका थिए। उद्घाटन सत्रमा एमाओवादी केन्द्रका सल्लाहकार जालीम मियाँ, स्थानीय विश्वनाथ कुर्मी, बुनीलाल राउत कुर्मी, द्वारिका कुर्मी, पप्पु पटेल, जगदीश पटेल, पारसप्रसाद कुर्मीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कुस्ती प्रतियोगितामा भारतको बनारस, सहोदरा, नेपालको मिर्जापुर, गर्दौल, बहुअरीका पहलमानहरूले भाग लिएका थिए। कुस्ती प्रतियोगितामा २० जोडी भिडेका थिए। पर्साका आठजना कराँते खेलाडीले पदक जिते प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ हेटौंडामा सम्पन्न सुमन बोमजन स्मृति नेशनल फुल कन्टेक्ट कराँते प्रतियोगितामा पर्साका आठजना खेलाडीले पदक जितेका छन्। प्रतियोगितामा ३५ किलो तौलमुनि समूहमा हिमाँशु यादव प्रथम भएका छन्। यसैगरी, ४५ किलो तौल समूहमा जुगली दास र विशाल कुशवाहा प्रथम, ५० किलो तौल समूहमा आयुष सिंह प्रथम, सगुन क्षेत्री तृतीय, पुरुष खुलातर्पm रवि पटेल तृतीय, प्र
वंशजको नागरिकतामाथिको प्रश्न
सञ्जय साह मित्र नेपाली समाजमा अहिले एउटा नयाँ बहसले स्थान पाउन थालेको छ। बौद्धिक समुदायले नागरिकताको बहसलाई महŒव दिन थालेको छ। हुनत एकजना कविले नागरिकता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता सबै विज्ञप्त रहेको र गरिबलाई यी तीनैले केही पनि दिन नसकेको भनेर सरकारी कोर्समैं पढाइ हुने गरेको छ तर पनि नागरिकता त्यत्ति महŒवहीन भने होइन। यदि नागरिकको लागि नागरिकता अधिकार मात्र भएको भए एकचोटि अधिकार प्राप्तिपछि यसको महŒव तुलनात्मकरूपमा कम हुन जान्थ्यो तर नागरिकता कुनै पनि नागरिकको लागि अधिकारभन्दा बढी सम्मानको पक्ष हो। यसकारण कुनै पनि नागरिकले आपूmले नागरिकता लिएको कैयौं वर्षपछि पनि नागरिकता प्रमाणपत्रलाई हातमा लिएर हेर्दा गर्वको अनुभूति गर्दछ। नागरिकता प्रमाणपत्रको अन्य धेरै प्रयोजन भए पनि वास्तवमा उसको आत्मसम्मानलाई उसकै अगाडि सम्बोधन गर्नु सर्वाधिक महŒवपूर्ण हुने गर्दछ। बहसमा रहेको नेपाली नागकिताको स्वरूप भने फरक छ। नेपालको संविधानमा नै संशोधन हुनुगरी नागरिकतासम्बन्धी दुईथरीको कुरा आइरहेका छन्। अङ्गीकृत नागरिकलाई देशमा बस्नेबाहेक अरू कुनै अधिकार दिनुहुँदैन र विदेशीसित बिहे गर्ने वंशज नागरिकमा
दुवै देश सतर्क हुनुप-यो
लागूऔषधको कुलतमा लागेकाहरू केसम्म गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा सिम्रौनगढका युवाहरूले साइकल, मोटरसाइकलको ट्युब टाँस्न प्रयोग हुने सुलेसन सुँघ्ने काम गरेबाट थाहा हुन्छ। भारतसँगको सीमावर्ती बजारहरूबाट लागूऔषध ब्राउनसुगर, टिडिजेसिक, नाइट्रोभेट, डाइजेपाम, जस्ता लागूऔषध नेपाली युवाहरूले लुकाइछिपाइ भिœयाउने गरेका छन्। सीमावर्ती बजारहरू रक्सौल, घोडासहन, बैरगिनिया, सीतामढी, जोगबनी, सिलिगुढी, रूपैडिया आदि स्थानमा काठमाडौं, पोखरा, धरान, हेटौंडा, नारायणघाटबाट युवाहरू लागूऔषधको कारोबार, सेवनका लागि पुग्ने गरेको पाइएको छ। स्थानीय युवाहरूको कमै संलग्नता रहेको भएपनि पछिल्लो समयमा राम्रो कमाइ देखेपछि उनीहरू यो कारोबारमा संलग्न हुनुका साथै कुलतको शिकार पनि हुने गरेको पाइएको छ। मकवानपुर र पर्सामा उत्पादित गाँजा, चरेस पर्साको विभिन्न नाकाबाट भारत पु¥याउने र भारतबाट ब्राउन सुगरलगायतका लागूऔषधहरू नेपाल भित्रिने क्रम लामो समयदेखि निरन्तर जारी छ। दुवै देशका प्रहरी प्रशासनले आआप्mनो क्षेत्रमा हुने यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सीमा सुरक्षा बैठकमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कारण अहिले यसको कारोबार देखावट
२०७३ मङ्सिर १५ गते बुधवार
२०७३ मङ्सिर १५ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस् ।
कृषि विकास बैंक चोरी प्रकरण केन्द्रबाट अनुसन्धान टोली आयो, रहस्य खुल्न बाँकी
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ कृषि विकास बैंक, वीरगंज शाखामा आइतवार राति भएको चोरी घटनाको छानबिन गर्न बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट तीन सदस्यीय टोली वीरगंज आएको छ । सो घटनामा शाखाको तिजोरीमा रहेको सुनमध्ये ७२ तोला सुन र ७४५ ग्राम चाँदी चोरी भएको बैंकले जनाएको छ। चोरीबारेमा अनुसन्धान गर्दा यो तथ्य फेला परेको हो। घटनालगत्तै केन्द्रीय कार्यालयबाट छानबिन गर्न विनोदकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली आएको छ। टोलीले तिजोरीको साँचो जिम्माबारेमा खोजीनीति गर्नुका साथै घटनाको प्रकृतिबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। २० वर्षअगाडि खरिद भएको तिजोरीको साँचो कसको जिम्मामा थियो भन्ने कुरा खुलिनसकेको कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजका प्रमुख चुडामणि शर्माले बताए। उनले बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २० वर्षअघि तिजोरी खरिद गरिएको देखिए पनि सोको साँचो ककसको जिम्मामा रहेको भन्ने बारेमा तथ्य खुलेको छैन। नियमतः तिजोरीको एक थान साँचो शाखा प्रबन्धक, अर्को साँचो खजान्ची र तेस्रो साँचो क्षेत्रीय कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेको देखिन्छ। यी तीनवटा साँचोमध्ये दुईवटा साँचोबाट मात्र तिजोरी खुल्ने गरे
लागूऔषधको विकल्पमा सिम्रौनगढका युवाहरू सुलेसन सुँघ्दै
प्रस, सिम्रौनगढ, १४ मङ्सिर/ सिम्रौनगढ बजारका युवाहरू लागूऔषधको कुलतमा लागेका पाइएको छ। भारतको घोडासहनबाट विभिन्न माध्यमबाट लागूऔषध नेपाल भिœयाउने काम हुँदै आएकोमा अहिले त्यसको असर स्थानीय युवाहरूमा परेको छ। महँगो मूल्यमा पाउने खैरो हेरोइनको कुलतमा लागेका स्थानीय युवाहरूको समूह अहिले पैसाको अभावमा सुलेसन सुँघ्दैछन्। भारतमा ५ सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको असर लागूऔषध प्रयोगकर्तामा पनि परेको छ। भारतमा गएर लागूऔषध सेवन गर्दै आएका स्थानीय युवाहरू अहिले सिम्रौनगढ बजारमा सुलेसन खरिद गर्ने र सँुघ्ने गर्न थालेको स्थानीय हीरालाल महतोले जनाएका छन्। युवाहरू सुलेसनलाई पोलिथिनको झोलामा राखेर सो झोलालाई फुलाउने र सास तानेर त्यसमा रहेको सुलेसनको गन्ध सुँघ्ने गरेको महतोले बताए।
ससुराको हत्या गरी ज्वाइँ फरार
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, पर्सा, १४ मङ्सिर/ पर्सा जिल्ला बिरुवागुठी गाविस निवासी ८३ वर्षीय धनबहादुर रानामगरलाई निजकै ज्वाइँले हत्या गरी फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमवार राति रक्सी सेवन गरी धनबहादुरका ज्वाइँ शेरबहादुर पहरीले ससुराको घाँटी थिची हत्या गरेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिप्रका, पर्साका प्रउ गोविन्द साहले मृतक मगरलाई उनकै ज्वाइँ पहरीले मदिरासेवन गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रतीकलाई बताए । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, चैनपुर गाविस–४ निवासी शेरबहादुर पहरी विगत केही दिनदेखि ससुरालीमा बस्दै आएका थिए । ससुराको हत्या गरी फरार रहेका पहरीको खोजी भइरहेको इप्रका एकटाँगाका प्रनानि लक्ष्मण गौतमले बताए । उनले शवलाई पोस्टमार्टमको लागि नाउक्ष्Fे अस्पताल वीरगंज पठाएको जानकारी गराए।
संविधान कार्यान्वयन नै राष्ट्रिय सहमति –नेता खनाल
प्रस, पथलैया, १४ मङ्सिर/ नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमति नै संविधान कार्यान्वयन रहेको भन्दै त्यसको विकल्प अहिले नरहेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल, बाराले सिमरा विमानस्थलमा मङ्गलवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमालेका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका खनालले राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधान कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। संविधान संशोधन गर्ने कुराको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै खनालले एमालेलाई एक्लाएर संविधान संशोधन सम्भव नरहेको बताएका छन्। एमालेको सहमतिबिना कसैले त्यो प्रयास गरे, त्यसको प्रतिवाद गर्ने खनालको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सहमति बनाउन र संविधान कार्यान्यवन गर्ने कुरामा एमाले तयार रहेको भन्दै खनालले एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सत्तारूढ दलसँग आग्रह गरे। संविधान संशोधनको कुरामा सत्तारूढ दलले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै खनालले एमालेसँग एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको अब विकल्प नरहेको बताएका छन्। प्रादेशिक विवादको कुरा अघि सारेर संविधान संशोसनको प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै खनालले संशोधन नै गर्नुपरे पनि निर्वाचित प्रदेशसभाको स्वीकृति लिएर मात्रै
नाला र सडकबाट पाइने सुनको कणबाट ५० परिवारको गुजारा
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ तस्वीरमा सडक सफा गर्दै गरेको देखिएकी यी महिलाले वास्तवमा सडक सफाइ गरेकी होइनन्। उनी दिनहुँजसो सडक र नालाबाट सुन खोज्ने काममा लीन हुन्छिन्। वीरगंजमा ४ सयको हाराहारीमा सुनपसल छन् र २५ भन्दा बढी सुनको गहना बनाउने कारखाना छ। सुनको गहना बिक्री गर्ने र सुनको गहना बनाउने कारखाना वरिपरिका नाला र सडकमा यसैगरी सुनको खोजी गर्न दैनिक ५० भन्दा बढी महिला संलग्न छन्। भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट यी महिलाहरू वीरगंज आएका हुन्। यिनीहरूले नालाबाट फोहर निकाल्ने र चलनीले छानेर सुनको कण खोजी गर्छन्। कण–कणमा रहेका सुनहरू जम्मा गरेर दैनिक एकजनाले रु. ५ सयसम्म कमाउने गरेको एक महिलाले बताइन्। विगत केही वर्षदेखि वीरगंजमा भारतीय महिलाहरूको समूह नाला र सडकमा सुन खोजी कार्य व्यावसायिकरूपमा गर्दै आएका छन्। सुनको कणबाट ५० भन्दा बढी परिवार पालिएको ती महिलाहरूले बताए। एकाबिहानैदेखि सुनको खोजीको लागि नाला र सडक सफा गरिन्छ र केही न केही सुनका कणहरू भेटिएकै हुन्छन्, महिलाहरूले भने।
शिलाभूमि अहिले कक्षा ४ मा, आमा रोजगार गर्न कतारमा
प्रस, निजगढ, १४ मङ्सिर/ शिलाभूमि अहिले ९ वर्षकी भएकी छन्। उनी निजगढ नगरपालिका–७ स्थित सत्यश्वर शिवशक्ति निम्न माविमा पढ्दै छिन्। शिलाभूमि अनाथ बालिका हुन्। शिलाभूमि लजालु स्वाभावकी छन् । शुरूदेखि नै यसै विद्यालयमा पढ्दै आइरहेकी छन्। उनी पढ्नमा राम्रो बन्ने प्रयासमा छिन्। दैनिक विद्यालय आउने र मन लगाएर पढ्ने बानी शिलाभूमिको रहेको शिक्षिका पुन्नी रानाले बताईन्। “हामीले सम्पूर्ण विद्यार्थीसँगै शिलाभूमिको पढाइमा ध्यान दिइरहेका छौं,” शिक्षकहरू रामशरण सुवेदी र उमेश स्वर्णकारले बताए। नर्सरीदेखि अहिले ४ कक्षासम्म आइपुग्दा शिलाभूमिको पढाइ सन्तोषजनक रहेको विद्यालयका प्रअ गोपाल थापाले बताए। जसले जन्म दिए पनि जसको सन्तान भएपनि पालनपोषण गर्ने आमा शान्ता विक भएकीले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा शिलाभूमिले पाइरहेको प्रअ थापाले बताए। शान्ताको भाइकी छोरी कञ्चन, आप्mनै छोरी प्रेरणासँगै शिलाभूमि पनि विद्यालय जान्छिन्। यिनलाई अर्काको सन्तान पालेको जस्तो गरी शान्ताले राखेको देखिंदैन्। यिनै लालाबाला हुर्काउन, पालनपोषण गर्न शान्ता कतार गएकी छन्। केही वर्ष काठमाडौंमा काम गरेकी शान्ता १ वर्षदेखि क
प्याब्सन टी–२० क्रिकेटको उपाधि गौतम माविलाई
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ पतञ्जलि आयुर्वेद प्रालि, प्रसौनी बाराको सहयोगमा प्याब्सन पर्साले नारायणी रङ्गशालामा सञ्चालन गरेको प्याब्सन टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि गौतम माविले हात पारेको छ। आज सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनलमा मनकामना माविलाई ७ रनको अन्तरले पराजित गर्दै गौतमले उपाधि हात पारेको हो। पहिले ब्याटिङ गरी गौतम माविले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाइ १३६ रन जोडेको थियो। गौतमका आदर्श यादवले ७ चौकाको सहयोगमा ४०, समीर अन्सारीले ५ चौकाको सहयोगमा २५, जावेद खानले १ चौकाको सहयोगमा १९ र अरबाज आलमले २ चौकाको सहयोगमा ११ रन जोडेका थिए। मनकामना माविका साहिल विस्वालले ४ ओभरमा ३ विकेट लिएका थिए भने सोनु अन्सारीले २ र आकाश साह तथा विश्वास यादवले १/१ विकेट लिएका थिए । प्रतिउत्तरमा १३७ रनको विजयी लक्ष्यसहित मैदानमा आएको मनकामना माविले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२९ रनमात्र जोड्न सकेको थियो । मनकामनाका आशिफ आलमले ३ चौकाको सहयोगमा ४९, इमामुल हकले ३ चौकाको सहयोगमा १८, शेख सहलले १ चौकाको सहयोगमा ७ रन जोडेका थिए। गौतमका महम्मद इमरान, आदर्श यादव, अमितराज यादवले २/२ विकेट चट्काए
कुरा मात्र धेरै
गाउँमा विकास छैन, गाउँ पिछडिएको छ, गाउँको विकास जरुरी छ। यसको लागि गाउँमा बिजुली, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू बेलाबखतमा उठ्दै आएका हुन। गाउँको विकासको लागि यो आवश्यक कुरा पनि हो। तर पर्सा जिल्लाको अवस्था हेर्दा यहाँ सरकारले विकासका लागि पठाएको सहयोगको उचित ढङ्गबाट प्रयोग नगरेको र प्रयोग हुन नदिएको कारण विकासका कामहरू हुन नसकेको आभास हुन्छ। जिल्ला विकास समितिमार्फत् जिल्लाको विकासमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। त्यसैगरी, ग्रामीण विद्युतीकरणको नाममा पनि धेरै खर्च भएको छ। खानेपानी संस्थानले पनि जिल्लाको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पानीटयाङ्कीको निर्माण गरेको छ। सडक विभागले पुलपुलेसा अनि सडक कालोपत्रे गर्ने काममा करोडौं खर्चेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको लगानी अत्यधिक छ। सरकारसँगै मित्रराष्ट्रहरूले विभिन्न सरोकारवाला एनजीओ, आइएनजीओबाट व्यापक खर्च गरेको देखिन्छ तर प्रतिफल भने शून्य देखिन्छ। सडकको हकमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहपछि कालोपत्रेको दर्शन पाइँदैन। जबकि २० वर्षअगाडि नै वीरगंज–पोखरिया कालोपत्रेको लागि सडक विभ
संविधान संशोधन र राष्ट्रवाद
विनोद गुप्ता योगगुरु बाबा रामदेवले वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल मुख्यतः तीनवटा समस्या संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक विचलनबाट जुधिरहेको बताउँदै योगले मनको शान्ति प्रदान गर्ने र त्यसपछि सबै आआप्mनो कर्ममा दत्तचित्त भइलाग्ने भएकाले समस्या समाधान हुने बताउनुभएको थियो । यसै क्रममा पत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार सत्तारूढ दल एवं मधेसी मोर्चाको सहमतिमा संविधानका ४ बुँदा, जसमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण सीमाङ्कन, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व तथा भाषाको मान्यतासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव सम्भवतः २५ नोभेम्बर अर्थात् मङ्सिर १३ गते दर्ता गराइने भनिएको थियो। यस क्रममा झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता विवादित जिल्लाहरूको बारेमा सङ्घीय आयोगले निर्णय गर्ने गरी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको ५ नं. प्रदेशबाट ५ पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिनेछ। त्यस्तै, नागरिकताको सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था लागू गर्ने, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा गर्ने र भाषिक मान्यताको कुरा स
२०७३ मङ्सिर १४ गते मङ्गलवार
२०७३ मङ्सिर १४ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस् ।
कृषि विकास बैंकबाट ९८ तोला सुन चोरी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कर्मचारीको संलग्नता
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ कृषि विकास बैंक, वीरगंज शाखामा चोरी भएको छ। गएराति वीउमनपा–१०, घण्टाघर, लिङ्करोडस्थित बैंकको तिजोरीबाट ९८ तोला सुन र ७४५ ग्राम चाँदी चोरी भएको शाखा प्रबन्धक नारायण शमर्Fले जानकारी दिए। शाखा प्रबन्धक शर्माले बिहान ८ बजे बैंक खोलेपछि तिजोरी खोल्न जाँदा सुन र चाँदी चोरी भएको पाइएपछि प्रहरीलाई खबर गरेको बताए। उनले चोरीको प्रकृति हेर्दा बैंक कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्ने अडकल गरे। उनले तिजोरीको तीनवटा साँचोमध्ये एउटा आपूmसँग र अर्को खजान्ची रवि तामाङसँग सुरक्षित रहेको र तेस्रो साँचो क्षेत्रीय कार्यालयको नाममा जारी भएकोमा सोही साँचोबाट चोरी भएको हुँदा कर्मचारीको संलग्नता देखिने उनले दाबी गरे। उनले तेस्रो साँचो क्षेत्रीय कार्यालयमा बुझाएको वा नबुझाएको बारेमा बैंकमा प्रमाण हेर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रराज जोशीले बैंकको पहिलो तलाको झ्यालको ग्रील उप्काएर चोर दक्षिणतर्पmबाट बैंकभित्र प्रवेश गरेको र तिजोरीमा रहेको ३ थान छड्के तिलहरीबाहेक सुन र चाँदी चोरी भएको बैंकले जनाएको बताए। प्रनाउ जो
विज्ञान प्रयोगशालाको नाममा करोडौंको भ्रष्टाचार
प्रस, पोखरिया, १३ मङ्सिर/ शिक्ष्Fा मन्त्रालयले विज्ञान विषयको अध्ययन हुने सबै मावि तहका विद्यालयहरूमा विज्ञान विषयको प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने निर्देशन जारी गरी सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराए पनि पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विज्ञान विषय अध्ययन गराइने माविमा प्रयोगशालाको अभाव रहेको पाइएको छ। सरकारले जिल्ला शिक्ष्Fा कार्यालयमार्पmत् पुस्तकालय र प्रयोगशालाको लागि विगतका वर्षदेखि नै प्रतिविद्यालय साढे ६ लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पर्सा जिल्लाका दुई दर्जन विद्यालयमा विज्ञान सङ्कायको अध्ययन हुने गरेको छ । ती विद्यालयहरूले जिल्ला शिक्ष्Fा कार्यालय, पर्साबाट सोबापतको रकम निकासा गरी लिएका छन्। आव २०७१/७२ देखि पर्सा जिल्लाका विज्ञान विषय पढाइ हुने दुई दर्जन माविले सो सुविधा लिएको तर प्रयोगात्मक प्रयोगशालाको निर्माण नगरेको पाइएको छ। मङ्गल मावि भिस्वा, नेरामावि मसिहानी, मुखदेव सुशीला मावि रामनगरी, नेराविमावि श्रीपुर, राधाकृष्ण मावि बहुअर्वाभाठा, रामचरित्र मावि पकाहा, नेरामावि चारगाहाले पुस्तकालय र प्रयोगात्मक प्रयोगशाला दुवै सञ्चालन गरेका छैनन्। विद्यार्थीहरूले विज्
ट्रकधनी गुप्ता १ लाख १० हजार धरौटीमा छुटे ट्रकचालक यादव अभैm फरार
प्रस, निजगढ, १३ मङ्सिर/ वनको नियन्त्रणमा परेका ट्रकधनी बारा गंजभवानीपुर–२ का शम्भुप्रसाद गुप्ता कानु आइतवार धरौटीमा छुटेका छन्। बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको एकल इजलासले धरौटी माग गरेको थियो। ट्रकधनी गुप्ताले १ लाख १० हजार धरौटी बुझाएपछि अदालतको आदेशबमोजिम तारेखमा गुप्तालाई छोडिएको हो। अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि ट्रकधनी गुप्ता तारेखमा छुटेको बारा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले जानकारी दिए। जिल्ला वन कार्यालय बाराले जाहेर गरेको मुद्दाका फरार अभियुक्तहरूका हकमा म्याद जारी गर्न, बरामदी वन पैदावर, बरामद भएको ना. ५ ख ७९०९ नम्बरको ट्रक र अन्य बरामदी सामानको हकमा अदालतले खोजी गर्दा उपलब्ध हुने गरी जिल्ला वन कार्यालय बारामा सुरक्षित राख्न आदेश दिएको छ। फरार प्रतिवादी ट्रकचालक धर्मनगर बाराका राधेचन्द्रप्रसाद यादवको हकमा म्याद जारी गरिएको जनाएको छ। गत कात्तिक २६ गते राति राजमार्गस्थित बाराको धन्सार पुलनजिकैको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भलुवाहीखोर इलाका वनबाट सालको गोलाइ लोड गरी राजमार्गमा आउने क्रममा काठ तस्करी रोक्न खनेको खाडलमा चक्का फसेको अवस्थाम
वीउमनपाले साप्ताहिक पत्रिकालाई रोकेको सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयले वीरगंजबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिकालाई आर्थिक सहयोग दिने भनी गरेको पूर्वनिर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ। सोमवार भएको सहमति अनुसार २०७३ साउनदेखि नै मासिक ३ हजारको दरले वीरगंजबाट प्रकाशित भई प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका साप्ताहिक पत्रिकाले सो सुविधा पाउनेछन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साको पहलमा विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूको सहभागितामा वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत पीताम्बर अधिकारीले साउनदेखि साप्ताहिक पत्रिकालाई मासिक रु. ३ हजारको दरले सुविधा उपलब्ध गराउनेमा सहमति जनाएका हुन्। प्रेस चौतारी नेपाल, पर्साले साप्ताहिक पत्रिकालाई सुविधा उपलब्ध गराउन मङ्सिर १० गते वीउमनपालाई ५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र दिएको थियो । सोही ज्ञापनको आधारमा आज वीउमनपाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायत पत्रकारसम्बद्ध अन्य सङ्घसंस्थासँग परामर्श गरी साप्ताहिक पत्रिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ सुविधा दिने जनाएको छ। अन्य पत्रपत्रिका, अनलाइन, एफएमलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नीति बनाएर सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति पनि वीउमनपाले ग
५ दिनदेखि सञ्चालित योग शिविरको समापन राजनीतिक सहमतिबाट समस्याको समाधान हुने– सभामुख मगर
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ पतञ्जलि योगपीठको आयोजनामा वीरगंजको आदर्शनगर रङ्गशालामा मङ्सिर ९ गतेदेखि सञ्चालित बाबा रामदेवको योग शिविर सोमवार समापन भएको छ। व्यवस्थापिका–संसद्की सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले शिविरको समापन गरेकी हुन्। सभामुख मगरले बाराको प्रसौनीमा आयुर्वेद उद्योग स्थापना भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताइन्। सो अवसरमा उनले हाल देशमा देखिएको राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक दलबाटै हुने बताइन्। दलहरूबीच सहमति कायम भई मुलुकले अग्रगामी फड्को मार्न सफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। योग शिविर समापन समारोहमा रामदेव बाबाले देश बलियो र समृद्ध बनाउन एकता आवश्यक भएको कुरालाई दोहो¥याए। उनले उद्घाटन समारोहमा सो कुरा बताएका थिए। समापन समारोहमा पनि रामदेव बाबाले तराई, पहाड, हिमालको कुरा छाडेर समृद्ध नेपालको पक्षमा सबैलाई एकताबद्ध भएर लागिपर्न आह्वान गरे। एकताबाटै देश मजबुत हुने र विकास सम्भव हुने उनले बताए। दैनिक हजारौं मानिस योग शिविरमा सहभागी हुँदै आएका थिए। भूकम्पको संयोग २०७२ वैशाख १२ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा रामदेव बाबाले योग शिविर सञ्चालन
दबावमूलक हस्ताक्षर अभियान
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ काठमाडौं–तराई निजगढ द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सङ्घर्ष समिति पर्सा, बारा, रौतहटले सोमवारदेखि वीरगंजको घण्टाघरमा हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेको छ। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष्F प्रदीप केडियाले हस्ताक्षर गरी अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए। कार्यक्रममा अध्यक्ष्F केडियाले विगत लामो समयदेखि सरकारले ल्याएको योजना विभिन्न कारण देखाउँदै अलपत्र परेकोमा दुःख व्यक्त गरे। राष्ट्रियस्तरको द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणपछि बारा, पर्सा, रौतहटमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालकै विकास हुने भएकोले वीउवासङ्घले यो अभियानलाई समर्थन गरेको उनले बताए। सङ्घर्ष समितिले मङ्सिर १७ देखि १९ गतेसम्म निजगढ–काठमाडौं पदयात्रा गर्ने जनाइएको छ। मङ्सिर १७ गते निजगढको शहीदचोकबाट सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले निजगढदेखि काठमाडौंसम्मको पदयात्रा गर्ने भएका छन् । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष्F रविराज डङ्गोलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा वीउवासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, सुबोध गुप्तालगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
प्याब्सन टी–२०ः गौतम र मनकामना मावि फाइनलमा प्रवेश
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ पतञ्जलि आयुर्वेद प्रालि, प्रसौनी बाराको आर्थिक सहयोगमा प्याब्सन पर्साद्वारा सञ्चालित प्याब्सन टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमवार भएका सेमिफाइनल खेलबाट फाइनलमा गौतम मावि र मनकामना मावि प्रवेश गरेका छन् । आजको प्रथम चरणको सेमिफाइनल खेल सनलाइट र गौतम माविबीच भएको थियो। टस जितेर सनलाइटले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १२९ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा गौतम माविले ११.४ ओभरमा १ विकेटको क्षतिमा १३३ रन बनाइ विजयी भएको थियो। सो खेलको म्यान अफ द म्याच गौतमका नीतीश पटेल भएका थिए। उनले ५९ रन लिएका थिए। त्यसैगरी, दोस्रो चरणको खेल मास्कोट र मनकामना माविबीच भएको थियो। टस जितेर मास्कोटले ब्याटिङ रोज्दै १६.३ ओभरमा १० विकेटको क्षतिमा ७७ रन मात्र बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा मनकामना माविले १८ ओभरमा ७ विकेटको नोक्सानीमा ७९ रन बनाइ विजयी भयो। यस खेलको म्यान अफ द म्याच मनकामनाका आकाश साह भएका थिए। मङ्गलवार गौतम र मनकामना माविबीच फाइनल खेल हुने भएको छ।
संविधान संशोधन र एमालेको अतिवाद
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानप्रति लगभग आधी जनताको असन्तुष्टि रहेको कारण ६ महिना देश बन्दीमा प¥यो। आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव १२ मा झ¥यो जुन चरम माओवादी द्वन्द्वकालभन्दा पनि कम हो। कालोबजारी त ह्वात्तै बढ्यो र आम जनताले सास्ती उठायो। यति भएपछि दलहरूले संविधानको पहिलो संशोधन गरे जसबाट थोरै भए पनि असन्तुष्टि कम भयो र मुलुक सामान्य अवस्थामा आयो । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त संविधानले अङ्गीकार ग¥यो। उक्त संशाोधन अलावा पनि यस्ता धेरै प्रFवधान छन् जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सङ्घीयताको सिद्धान्त एवं समानताको प्रतिकूल मात्र छैन, परस्पर विरोधाभासी पनि छ। यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन पेचिलो बनेको छ। वर्तमान संविधानमा धेरै कुरा अधूरो अपूरो छ, जसलाई पूरा गर्नैपर्छ भन्ने कुरा अधिकFंश बौद्धिक वर्गले महसुस गरेको छ। यही कठिनाईलाई महसुस गरी सरकारले पाँच विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ। जुन सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य कुरा हो, तर दोस्रो ठूलो दल एमाले संशोधनको विरोध गरी सडक र सदन दुवै चर्काउने पालो कुरी बसेको छ। यो एमालेको अतिवाद हो। कुनै राजनीति
एकताका देशभरि नै साझा यातायातको बिगबिगी थियो। जहाँ जानुपरे पनि साझा उपलब्ध थियो। साझाले नेपालको यातायात सेवालाई मानक पनि बनाएको थियो। सीटभन्दा बढी मान्छे नराख्ने, समयमा हिंड्ने र समयमा पु¥याउने साझा यातायातको विशेषता थियो। तिनताक मानिस रात्रियात्रा गर्दैनथे वा रात्रिसेवाको यातायात साधनहरू सञ्चालनमा आएका थिएनन्। प्राइभेट बसहरू पनि दिउँसो मात्र चल्थे। साझा थलिन थालेकै बेला भैंसे भएर कुलेखानी हुँदै राजधानी जाने छोटो दूरीको बाटो खुलेपछि र त्यहाँ टाटा सुमो गाडीहरूको एकाधिपत्य भएपछि मानिस यही बाटो हिंड्न थाले। त्यसै कारणले हो वा किन हो, प्रायः यस भेगबाट राजधानी जानका लागि रात्रिबसबाहेक धरै रहेन। एकदुई पटकका लागि त रात्रिबस रोमाञ्चक हो, तर पछि पट्यारलाग्दो भयो। मानिससँग विकल्प थिएन। कि टाटा सुमोमा कोचिएर दिउँसो यात्रा गर, होइन भने रात्रिबसबाहेक आरामसँग राजधानी पुग्न विकल्प नै छैन। यसैबीच राजधानीमा साझा यातायात खुलेको खबर आएको छ। साझा यातायातको सेवा अन्यत्र पनि विस्तार हुने समाचार आएको छ। बितेको दुई दशक पहिले साझाको आनन्द लिएका यात्रीहरूका लागि यो खुशीको खबर हो। साझा यातायात सञ्चालन भ
२०७३ मङ्सिर १३ गते सोमवार
२०७३ मङ्सिर १३ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
संविधान संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा– प्रधानमन्त्री
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ वीरगंज, आदर्शनगर रङ्गशालामा जारी योग विज्ञान शिविरको समापन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष्F पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट गरिने भनिएकोमा उनी एक दिन अगाडि आएर फर्केका छन् । संविधान संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै शिविरको समापन समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने हुनाले प्रधानमन्त्री दाहाल आज वीरगंज आएर योग शिविरमा सहभागी भई काठमाडौं फर्केका हुन् । उनले हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई एकसूत्रमा बाँध्ने गरी संविधान बनाउने आप्mनो प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै संशोधनपछि संविधान कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका रहने बताए । सबैको चित्त बुझ्ने गरी संविधान संशोधन गराउनेतर्पm पहल भइरहेको बताए । योग शिविरको चौथो दिन विद्यार्थी र महिलाहरूको लागि रङ्गशालामा आयोजना गरिएको विशेष योग शिविर कार्यक्रममा बोल्दै प्रम दाहालले बाबा रामदेवले योगलाई उद्योगसँग जोडेर नयाँ पद्धतिको विकास गरेको बताए । उनले यसबारे रामदेव बाबासँग आप्mनो पटक–पटक संवाद भएको र आपूm यस पद्धतिबाट निकै उत्साही भएको बताएका थिए । प्रम दाहालले योगको आविष्कार नेपालबाट भएको दाबी गर्दै नेपालबाट शुरु भएक
योग विज्ञानद्वारा सबैभन्दा बढी रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ योग विज्ञान शिविर समितिको आयोजनामा आज राणी सति अतिथि सदनमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ६७ महिलासहित ३९७ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रक्तसञ्चार केन्द्र, वीरगंजले हालसम्म आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममध्ये आजको सङ्कलन सबैभन्दा बढी भएको केन्द्रका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले बताए । यस अघि वीरगंज युवा समाजले ३५२ पिन्ट रगत सङ्कलन गरी अग्रस्थानमा थियो भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा सिमरा ३४५ पिन्ट रक्तदान सङ्कलन गरी दोस्रो स्थानमा थियो । योग विज्ञान शिविर समितिका अध्यक्ष्F डा. उपेन्द्र महतो र योगगुरु रामदेव बाबाले संयुक्तरूपमा रक्तदान गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । रक्तदान कार्यक्रममा राजु साह, रामराज राजपूत, शम्भु घिमिरे, दीपक कर्ण, विजेन्द्र कुशवाहा, रोशन राई, राजकुमार सर्राफ, गजेन्द्र दास, सिमरन खड्का, मनीषा शर्मा, नवलकिशोर साह, नरेन्द्र यादव, मणिकुमार गुप्ता, हरिओम गुप्ता, स्नेहा झा, शारदा सिंह, तारा पारिख, रजत टिबडेवाला, निर्मला देवीलगायत ले रक्तदान गरेको प्रमुख मानन्धरले बताए । कार्यक्रममा रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंज प्रमुख मानन्धरसमेत श्री राणी स
सबैको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ– देउवा
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, पर्सा शाखाले स्थानीय होटल भिस्वामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै सभापति देउवाले मधेसबाट उठेको माग अधिकतम सम्बोधन हुनेगरी सम्भवतः आजै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा नेका रहेको बताए । उनले प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्ने र एमालेले पनि प्रस्तावकै पक्षमा मत हाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सभापति देउवाले सिमरा आउने क्रममा हिजो एमाले अध्यक्ष्F केपी ओलीसँग विमानस्थलमा केही बेर कुराकानी भएको र कुराकानीबाट समस्या समाधान हुने सङ्केत मिलेको बताए । उनले सीमाङ्कनको हकमा मधेसी जनता कतै पहाडसँग अलग्गिन नचाहेको र कतै मिल्न नचाहेको हुँदा दुवै कुरालाई समायोजन गरिने बताए । उनले नागरिकताको सवालमा पनि नेका मधेसी जनताभन्दा पृथक नभएको दाबी गरे । पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा लामो समयदेखि स्थगित जिल्ला अधिवेशन एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उनले दाबी गरे । पत्रकार सम्म
मङ्गलवारदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ सरकारको निर्देशन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूले अनिवार्यरूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान पूरा भएपछि वीउमनपाले सामाजिक सुरक्षाभत्ताबापतको रकम वितरण गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । वीउमनपा लेखापाल हरि पोखरेलले सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ताबापत वीउमनपाले तोकिएको बैंकहरूमा आज रु ५ करोड १५ लाख पठाएको बताए । वीरगंज उपमहानगरपालिका अन्तर्गत ३० वटा वडामा १२ हजार ७ सय १७ जना एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, आंशिक अपाङ्ग, पूर्ण अपाङ्ग, दलित बालबालिका, दलित ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । वीउमनपा प्रशासन फाँटका रामचन्द्र पटवारीले उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको ३० वटा वडामा एकल महिला ३ हजार ५ सय ९५, ज्येष्ठ नागरिक २ हजार ७ सय १७, आंशिक अपाङ्ग १८३, पूर्ण अपाङ्ग १३३, दलित बालबालिका २ हजार ४, दलित ज्येष्ठ नागरिक ८ सय ४६ रहेको बताए । उनले वीउमनपाले सम्बन्धित वडा सचिवको सिफारिसमा बैंकमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाएको बताउँदै वडा नं. १ देखि १८ सम्मका सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता पाउनेले नेपाल बैंक लि., सिटी अफिस बिर्तामा खाता खोल्नुपर्ने त्यसैगरी १९, २०, २२, २७, २८, २९ नं.वडाका मानिस
अस्पतालका दुई बिरामीको मार्मिक कथा
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ नाउक्षे अस्पतालमा एक महिनादेखि उपचार गराइरहेका निजगढ निवासी ५० वर्षीय प्रेमबहादुर सुनुवारलाई परिवारले छाडेपछि उनको बिचल्ली भएको छ । एक महिना पहिले हेटौडा नगरपालिकाले सुनवारलाई उद्धार गरी उपचारको लागि नारायणी उपक्ष्Fेत्रीय अस्पताल पठाएको थियो । सुनुवारको पत्नी तथा छोरा छन् । घाइते सुनुवारकी पत्नी र छोरा दुई साता अघि उनलाई भेट्न अस्पताल आए र दुई दिन बसी बेपत्ता भएपछि बिरामीको बेहाल भएको स्टाफ नर्स मनीषा पाण्डेले बताइन् । जीउभरि घाउ निस्केको सुनुवारलाई भेट्न पछि पत्नी र छोरा नआएको नर्स पाण्डे बताउँछिन् । छोराको बिहे परेकोले घाइते सुनुवारकी पत्नी तथा छोराले उनले अचेत अवस्थामा छोडेर भागेको अन्य बिरामीका कुरुवाहरूले बताए । बेड नं. १०८ मा उपचार गराइरहेका सुनुवारको कुरुवा नभएको कारण खाना खुवाउने, दिसापिसाब गराउन अप्ठेरो भएकोले बेडमा नै दिसापिसाब गर्दा अस्पताल दुर्गन्धित भएको पाण्डेले बताइन् । उनीसँग उपचार गराइरहेका बेड नं. १०९ का चपुर निवासी रामाशीष चौधरीकी पत्नी उनको हेरचाह गर्दैछिन् । चौधरीको घाउको कारण खुट्टा काटिएको र उनी ७ महिनादेखि उपचार गराइ
वीरगंजको पर्यावरणप्रति तमसपाको चासो
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, पर्सा शाखाले आज वीरगंज नगरलाई धूवाँ, धूलोमुक्त बनाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्पmत् अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । तमसपा, पर्साका अध्यक्ष्F वीरेन्द्र यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वीरगंज भन्सारबाट देशको ६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने गरेको तर सडकको अवस्था जीर्ण हुँदै गएकोमा राज्यले कदम नचालेको कारण अर्थ मन्त्रालयबाट छुट्टै योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । धूवाँ, धूलोको कारण वीरगंजवासी आजित भएको र कष्टकर जीवन बिताइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै वीरगंज भन्सारबाट सङ्कलन हुने राजस्व स्थानीय स्वायत्त ऐन अनुसार ५ प्रतिशत वीरगंज नगरलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग मागसमेत गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ घिमिरेले तमसपाले चालेको कदम सराहनीय भएको र धूवाँ, धूलोको कारण आपूm पनि अस्वस्थ भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नगरवासीको लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताए । उनले आजै ज्ञापन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी गराए ।
सभापति देउवाद्वारा चौथो दिनको योग शिविरको उद्घाटन
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ आदर्शनगर रङ्गशालामा पतञ्जलि आयुर्वेद प्रालिद्वारा आयोजित योग विज्ञान शिविरको आज चौथो दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे । शिविरको पहिलो दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् भने त्यसपछि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष्F राजेन्द्र महतो, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको क्रममा देउवाले योगले शारीरिक र मानसिकरूपमा स्वस्थ बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । उनले योगले मानिसलाई दीर्घकालसम्म स्वस्थ जीवन जिउन योगले सघाउने बताए । उनले बारा जिल्लामा पतञ्जलि उद्योग सञ्चालन भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
वन कर्मचारी, प्रहरीको लाइनमा ढुङ्गा तस्करी
प्रस, निजगढ, बारा, १२ मङ्सिर/ क्रसरमा लैजान ट्याक्टरले जोतेर अप्राकृतिक ढुङ्ग उत्खनन भइरहेको छ । निजगढ, बकैया खोलाबगरबाट यसरी नैं जोतेर ढुङ्गा निकाल्दै क्रसरमा निर्वाध लगिरहेका छन् । यसरी ढुङ्गा निकाल्न ऐन, मापदण्डले वर्जित गरेको छ । सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चिथोरेर दिनदहाडै उत्खनन भइरहे पनि जिल्ला वन कार्यालय बारा, जिल्ला प्रशासन बारा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा बेखबर बन्दै आएको छ । जिल्लास्थित यस मातहतका निजगढ सेक्टर वन, इलाका प्रहरी निजगढ, सशस्त्र प्रहरी निजगढले ढुङ्गा माफियाहरूलाई लाइन दिएकै कारण ऐन, मापदण्डविपरीत उत्खनन हुँदै आएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ । यसरी जथाभावी ढुङ्गा उत्खनन गर्ने, गराउने समूह, माफियासँग स्थानीय प्रहरी, वन कर्मचारी मिलेकै कारण क्रसरले मनपर्दो किसिमले ढुङ्गा लैजान पाएको छ । यसरी निकालिएका ढुङ्गा खोलाबगर किनारमा थुपार्ने र नजिकैको क्रसरमा बिक्री गर्ने गरिन्छ । यो खेल वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । मापदण्ड विपरीतका क्रसरको हकमा ७५ महिना नाघिसक्दा पनि राज्यले कुनै निकास दिन नसक्दा क्रसर उद्योगले मनोमानी झन बढेको हो । एकमुस्ठ ३ वर्ष र पटकपटक